शुल्क उठाउने नाममा निजी विद्यालयको बदमासी! - HKNepal.com - First Nepali Internet Magazine Hong Kong | एचकेनेपाल डट कम
शुल्क उठाउने नाममा निजी विद्यालयको बदमासी!
११ असार २०७७, बिहीबार ११:४५
कोरोना भाइरसका कारण सबै तहका विद्यालयको पठनपाठन बन्द रहेका बेला ललितपुरको एउटा निजी विद्यालयले भने यातायात शीर्षकमा समेत रकम तोकेर अभिभावकलाई बिल पठाएको छ।
कोरोना भाइरसका कारण मुलुकले लकडाउनको समस्या झेलिरहेका बेला ललितपुरस्थित युलेन्स स्कुलले यातायात शीर्षकमा समेत रकम तोकेर बिल पठाएको हो।
पछिल्लो समयमा निजी विद्यालयले पठनपाठन नभए पनि रकम तिर्न अभिभावकसँग ताकेता गरिरहेका छन्। निजी विद्यालयको यो कदमको चर्काे आलोचना भइरहेको छ । कतिपय निजी विद्यालयले त खानाको रकम पनि बिलमा जोडेका छन्।
युलेन्स स्कुलले कक्षा ११ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पठाएको बिलमा यातायात खर्च शीर्षकमा १० हजार चार सय रुपैयाँ राखिएको छ। वैशाख, जेठ र असार गरी तीन महिनाको भनेर सो रकम जोडिएको हो । तर, लकडाउनका कारण भने विद्यार्थीले एक दिन पनि सो स्कुलको गाडी चढेका छैनन्।
अभिभावकलाई पठाइएको बिलमा ब्रेकफास्ट, ल्याब शुल्क, फिल्ड ट्रिपलगायत शीर्षकमा पनि रकम तोकिएको छ। युलेन्स स्कुलका प्रिन्सिपल मेदिन लामिछानेले विद्यार्थीसँग यातायात शुल्कबापत कुनै रकम नलिएको दाबी गरे। तर, उनको यो दाबीमा भने कुनै सत्यता भेटिँदैन। कक्षा ११ का विद्यार्थीको नाममा पठाइएको बिलमा यातायात शुल्क भनेर स्पष्ट किटान गरिएको छ।
उनले नयाँ शैक्षिक सत्रको वैशाख, जेठ र असारको मासिक शुल्क २१ प्रतिशत घटाएर हरेक अभिभावकलाई पत्र पठाइएको बताए। उनले भने, ‘अतिरिक्त शुल्क भने लिएका छैनौं। विद्यार्थीसँग यातायात शुल्क पनि लिएका छैनौं।’
पछिल्ला केही दिनदेखि भने निजी विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्रको शुल्क बुझाउन अभिभावकलाई ताकेता गर्न थालेका छन्। टेलिफोन, मेल र एसएमएसमार्फत रकम बुझाउन ताकेता गरिएको हो। यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रशान्त वलीले लेखेका छन्।
Tags: निजी विद्यालय, बदमासी, युलेन्स स्कुल
काठमाडौँ भित्रनेलाई १४ दिन होम क्वारेन्टिन अनिवार्य, नबसे कारवाही गर्न आदेश
बेलायतमा जुलाईबाट लकडाउन खुकुलो हुने…
प्रतिकिलो १०० रुपैयाँमा सलह किन्ने कृषिविज्ञ राईको घोषणा
१६ असार २०७७, मंगलवार १४:५६
आफैँले बोकेको पेस्तोलले गोली हानी प्रहरीद्वारा आत्महत्या
१६ असार २०७७, मंगलवार १४:५०
फिलिपिन्सबाट हङकङ फर्केका ३ महिलालाई कोरोना …
१५ असार २०७७, सोमबार १६:३०
२० भन्दा बढी देशका ११ हजारभन्दा बढी नेपालीको उद्धार, ८७ वटा शव नेपाल ल्याइयो
१४ असार २०७७, आईतवार १६:०७
शव व्यवस्थापनमा खटिएका दुई सैनिक जवानमा कोरोना पोजिटिभ
१४ असार २०७७, आईतवार १०:३०
Harke Haldar | Jun 26, 2020
यस वर्ष हङकङ बन्यो विश्वकै महँगो शहर…
३२ जेष्ठ २०७७, आईतवार २२:५८
Trending Now : पर्यटनमा ४१ अर्ब क्षति